Ukuqinisekiswa kwekhwalithi - Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd.
Sikholelwa ngokuqinile ukuthi ingaphambili lomkhiqizo liza kuqala ekulawuleni ikhwalithi. Ngokusebenzisa uhlelo lwe-IPQC lokuhlolwa kwendatshana yokuqala, ukuhlolwa kwenqubo nokuhlolwa kokugcina, ikhwalithi yenqubo yokukhiqiza ingalawulwa futhi ithuthukiswe ukuqinisekisa ukudlula ngesilinganiso semikhiqizo;
Ukuvikela ukuphuma kwemikhiqizo engafanelekile, sisetha inqubo yokuhlola (i-FQC) ukwenza ukuhlolwa kweqoqo emikhiqizweni ekhiqizwa inqubo efanayo nomshini ofanayo, futhi imikhiqizo ingadluliselwa kwinqubo elandelayo ngemuva kokuba ifanelekile ;
Ngaphambi kokugcina impahla, simisa iqembu lokuhlola lomkhiqizo eliqediwe (i-OQC, i-QA) ukwenza ukuhlolwa okuzungeze yonke imikhiqizo. Ngaphambi kokulethwa, senza ukuhlolwa kwesampuli kwimikhiqizo efanelekile, ukuze kuqinisekiswe ukuthi imikhiqizo kufanele ibe sesimweni esifanelekile lapho ithunyelwa kwamanye amazwe ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende.
Ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yemikhiqizo, uJixin wathenga ngokulandelana izinsimbi zokuhlola ezinjenge-imager, i-altimeter enezinhlangothi ezimbili ne-cubic element, futhi wasungula isikhungo sokuthola ngokunemba, esathola ukufakwa okugcwele kwebanga lokutholwa komkhiqizo kusuka kusilinganiso sobukhulu kuya ekusebenzeni ukutholwa.